मलेसियामा इलिगल बस्नेहरुलाई झनै गाह्रो हुने भयो ! यतिधेरै समातिए - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा इलिगल बस्नेहरुलाई झनै गाह्रो हुने भयो ! यतिधेरै समातिए
४ पुस, मलेसिया ।
“निरी’क्षणको परिणाम स्वरूप, सबैलाई उचित पास नभएको कारण पक्रा’उ गरिएको थियो,” उनले भने। कारबाहीमा परेका अ’वैध आप्रवासीमध्ये कुनै पनि परिचयपत्र नभएको, ओभर’टाइम स्वदेशमा बसेको, म्याद नाघिसकेको अस्थायी काम भ्रमण पास र अध्यागमन ऐन, १९५९/६३ (ऐन १५५) बमोजिमको अन्य अप’राध रहेको उनले बताए । “थप अनुसन्धानको लागि अध्यागमन डि’टेन्सन डिपोमा पठाउनु अघि सबै बन्दीहरूलाई को’भिड-१९ स्क्रि’निङ टेस्ट गराइनेछ,” उनले भने।